नेपालकाे युएईविरुद्ध बिशाल जित, साेमपालले लिए ५ विकेट - Nepal Cricket
नेपालकाे युएईविरुद्ध बिशाल जित, साेमपालले लिए ५ विकेट
Sompal Kami takes five-fer against UAE in second ODI match. Photo: TheNational.ae
युएईविरुद्धको एक दिवशीय सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले १ सय ४५ रनको जित निकालेको छ ।
सोमपाल कामी र सन्दिप लामिछानेको उत्कृष्ट बलिङको सहयोगमा नेपालले २४२ रनकाे विशाल लक्ष्य रक्षा गर्न सफल भयो । सोमपाल कामीले ५ विकेट लिए भने सन्दिपले चार विकेट लिएका थिए । यो जितसँगै नेपालले तीन खेलको श्रृङ्खला १-१ को बराबरीमा ल्याएको छ । साेमपाल एकदिवशीय क्रिकेटमा ५ विकेट लिने पहिलाे नेपाली खेलाडि बनेका छन ।
टस जितेर ब्याटिङ गर्दा नेपालले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै २ सय ४२ रन बनाएको थियो । यो योगफल नेपाली क्रिकेट टिमको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो एकदिवशीय योगफल हो । आज नेपालले एक दिवशीयमा सबैभन्दा धेरै रनको साझेदारी गर्यो । पहिलो विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र मल्ल र विनोद भण्डारीले ६१ रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई बलियो शुरुवात दिलाएका थिए । ज्ञानेन्द्रले ब्यक्तिगत ४४ रन बनाउनुभन्दा अघि विनोद भण्डारी २१ रन बनाउँदै आउट भए ।
Rohit Kumar Paudel hits half-century against UAE. Photo: TheNational.ae
त्यसपछि क्रिजमा आएका पारस खड्का, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र पवन सर्राफले भने राम्रो खेल्न सकेनन् । पारसले २१ रन बनाए भने दिपेन्द्रले १० र पवनले ८ रन जोडे । त्यसपछि क्रिजमा आएका आरिफ शेख र रोहित कुमार पौडेलले नेपालको योगफलमा उत्कृष्ट योगदान गरे । उनीहरुले ८२ रनको पार्टनरसिप एक दिवशीय क्रिकेटमा नेपालको कीर्तिमानी पार्टनरसिप हो ।
आरिफ शेख २९ रन बनाएर आउट हुँदा नेपालले १९५ रन बनाएको थियो । त्यसपछि रोहित कुमार पौडेलले करियरकै पहिलो एक दिवशीय अर्धशतक बनाए । उनी अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवशीयमा सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने खेलाडीसमेत बने । उनी अहिले १६ वर्ष चार महिना २४ दिनकामात्र भएका छन् । रोहितले ५५ रनको योगदान दिएर आउट भए । त्यसपछि करण केसीले ११ बलमा एक चौका र दुई छक्का प्रहार गर्दै १८ रन बनाए । अन्तिममा सन्दिप लामिछानेले पनि १० बलमा १४ रन जोडे ।
बलिङतर्फ अमिर हयात र इमरान हैदरले तीन-तीन विकेट लिए भने मोहम्मद नाभिद, जहुर खान र अश्फाक अहमेदले एक एक विकेट लिए । २ सय ४३ रनको लक्ष्य पछ्याएको युएईलाई नेपालले १९ ओभर ३ बलमा ९७ रनमा प्याक गर्‌यो ।
युएईका लागि मोहम्मद उश्मानले सर्धाधिक २६ रनको योगदान दिए । अन्य ब्याट्सम्यान नेपाली बलरको दबाबमा परेका थिए । नेपालाई जीत दिलाउन साेमपाल कामीले पाँच विकेट लिए । सन्दिप लामिछानेले पनि १५औं ओभरमा तीन विकेट लिएका थिए । तेस्रो तथा निर्णायक एक दिवशीय खेल सोमबार हुनेछ ।